Mbudzi 29, 2011 pa 7:18 ndiri
Short Bumbiro runhare transposh Widget haashandi uye kunokonzera kukanganisa dzinouraya –
– kanyanyisa kukanganisa: Danai Undefined nzira transposh_plugin_widget:: transposh_widget () mu pamutsetse 407
sei ndakatsaura ichi? The yose Nzvimbo haisi kushanda mushure update nokuda kwokukanganisa ichi 🙁
Mbudzi 29, 2011 pa 7:42 ndiri
Ehe, kapukanana – ndapota kutsiva 407 maererano:
uye edza zvakare,
Zvingave kuva zvinokosha kuziva kuti unogona kutumira param zvino nokududza Zvinoonekwa zviri plugin mukati $instance shanduka
Mbudzi 29, 2011 pa 10:10 ndiri
Ndatenda! Hongu ichi ndicho debug yekubvuma! Asi ikozvino hunoratidza listbox uye ndinoda kuratidza mireza. How kuzviita zvakaipa kuitira kuti mireza anonyorwa.
Mbudzi 29, 2011 pa 12:15 pm
Sezvo Ndinofunga muri kuchipa kufanana:
ikozvino Unofanira kumutumidza zvakada:
Mbudzi 29, 2011 pa 12:39 pm
Zvose akashanda zvakakwana 🙂
Mbudzi 29, 2011 pa 12:45 pm
Hi ndiri vane dambudziko iroro. Ndinoita tsvaka Where 407 mutsetse saka ndinogona kutsiva pamwe pamusoro debug remitemo ndapota? Ndatenda
Mbudzi 29, 2011 pa 8:45 pm
ayo ari transposh_widget.php iri netori Directory yacho plugin, kana iwe usingagoni kubata, shandisa kuonana isu kuumba pasi panzvimbo iyi uye isu ndichatuma kwauri yakamisirwa shanduro
Mbudzi 29, 2011 pa 1:06 pm
Ndatenda, asi sei vapinze CSS?
Ndinoshandisa transposh_widget(gurusvusvu(), gurusvusvu('rokuremekedza’ => 'Translation', 'widget_file’ => 'Mireza / tpw_flags.php'));
Flags vava, zvisinei, asingaiti Takudzai tpw_flags.css.
Mbudzi 29, 2011 pa 11:43 pm
Ehe, ichi chinhu runonyengera chikamu,
pane nzira mbiri kubata ichi, munhu kuti ndichaita kufunga nezvezvimwe nzira kugadzirisa kuti (clueless) uye mumwe kuti kuwedzera Widget kuti sidebar hausi kuratidza izvo zvichaita kumanikidza Kuwedzerwa CSS.
Zvechokwadi Bumbiro ichi chaiva runonyengera nekuti ikozvino CSS inowedzerwa (uye aggregates) nokuti zvose zvinoshingaira Widgets, uye hapana nzira kuziva chokwadi iyo sidebars achaita kuratidza iro peji, saka basa Widgets vanoonekwa.
imwe nzira nzira richava kumanikidza kuwedzera yakarurama CSS chaiko nzvimbo zvechokwadi kuurayiwa peji, izvo zvinoreva achiwedzera chiito pamusoro wp_print_scripts uye iro kubata Widget kirasi add_transposh_widget_css … Ndinofunga izvi zvichava basa rakawandisa, saka achienda hackerish nzira haisi pfungwa yakadaro dzakaipa.
Mbudzi 29, 2011 pa 9:55 ndiri
Tinotenda kuti basa iwe mutiitire.
Unogona kujekesa apo kuwana API ANOKOSHA kuti dzinoisa mashoko plugin?
Mbudzi 29, 2011 pa 12:08 pm
Chekutanga, Ndichaita kujekesa kuti iwe pari havadi chero makiyi uye zvose zvichaita kushanda.
Ndinogona kukutaurirai kuti nzira yakanakisisa kuwana kiyi ndiko kushandisa kutsvaka injini kudzitsvaka, chete tsvaka “X kududzira API Key” apo X ndiro zita renyu kufarira mumwe,
Handisi nokuisa zvakananga Links nokuti:
1. Vanoramba vachichinja maURL dzavo, uye havatsvaki dzifambirane munhu, saka handidi kutsausa vaverengi ramangwana
2. Handisi ndichipfeka inobhadharwa achitaura kwavari, uyewo Ndinofunga chinodiwa kuti uite kuti
3. Ndiri kuva zvishoma simbe 😉
Mbudzi 29, 2011 pa 4:51 pm
Chaizvoizvo zvikuru nokukurumidza, makorokoto.
Asi, Ndine dambudziko kuumba munhu SITEMAP uyo ichataura ose namarimi. Une mhinduro dambudziko iri?
Mbudzi 29, 2011 pa 8:46 pm
Pane chigamba dziripo Google XML Sitemaps plugin, uyewo – mhando 4 Beta kuti Plugin Hazvidi chigamba. Unogona kuwana chigamba yedu trac yepaIndaneti
Mbudzi 29, 2011 pa 11:10 pm
saka zviri nani kuti kumirira itsva 0.81 mhando ? kana hatidi achichisonera panguo manually ?
Mbudzi 29, 2011 pa 11:25 pm
Ndinovimbisa kuchava notupukanana itsva 0.8.1 😉 asi zvakakomba, mungandizivisa kunyora uye ini ndichatuma kwauri zvigamba shanduro, kana achichisonera panguo iwe. wo – vanozvishandisa vakawanda vasiri kushandisa chikamu ichi, iro rinogona kutsiviwa nokuisa mumwe Widget kopi ari sidebar uye pane kuisa mashoko Widget remitemo zvakananga, kuisa mashoko sidebar…
Mbudzi 30, 2011 pa 1:41 ndiri
Mhoro, tanga kuonga zvose nokuda kwenyu anoshamisa plugin. Chepiri, mushure Last update Ndiri kukwanisa aongorore shanduro yangu. Pandinenge clich kuti Edit bhatani peji kuchinja mu kushandura nzira asi handina chinhu Popup hwindo yokugadziridza. Unga ndibatsira here?
Mbudzi 30, 2011 pa 7:01 pm
Ndapota shandisa kuonana chimiro uye ticharamba kushanda nemi pamusoro kugadzira ichi, zvichida kunetsana mutsva nevamwe plugins
Mbudzi 30, 2011 pa 9:44 pm
Ezio, unogona kuongorora kana Popup hwindo ava kuratidza pakuguma peji yako pasina nemanyorero?
Mbudzi 30, 2011 pa 7:53 ndiri
Mhoroi apo. Ini ndakakunda akaruramisa Tsikidzi asi handigoni kushandura dropdown shure mireza. Ko ini kuwedzera pamusoro remitemo kusvika pasi widget.php kana yakasiyana faira?
Mbudzi 30, 2011 pa 7:00 pm
Unofanira kushandura bumbiro akadana kuti Widget, zvakatsanangurwa pamusoro
Mbudzi 30, 2011 pa 9:59 ndiri
Ciao, Ini chete akagadza shanduro itsva 0.8.0, asi zvino hapana mabasa zvakare… dhiri? kuvonga!
Mbudzi 30, 2011 pa 7:02 pm
Tapota taura nesu zvakananga uye Tichaedza kuchigadzira
Zvita 5, 2011 pa 12:54 pm
Nemhaka Kuwanikwa kuti chikwata: Ini rwakapedza dambudziko canbiando JQuery uye manyorero kuti chokuita 🙂
Deborah Gamble anoti
Mbudzi 30, 2011 pa 4:07 pm
Transposh haatomboratidzi zvakakodzera shanduro 0.8.0 Pane imwe parumananzombe?
Mbudzi 30, 2011 pa 7:05 pm
Hello ikoko, sokuti somunhu CSS nyaya, kutirovera runhare pachake kushanda ari parumananzombe
Glenn Newland anoti
Mbudzi 30, 2011 pa 5:44 pm
Ndiri greatful ose basa iwe muhombodo kwebhuku itsva, muchicherekedza zvakaoma sei Google API dambudziko angave kukurira pakutanga. KUITA ZVAKANAKA!
Zvandiri kuziva ndiko seiko ini nechokwadi nzvimbo yangu iri akanyorwa dzakawanda kutsvaka injini, mumutauro mazhinji? Ndoreva, inobvuma transposh nzvimbo yangu zvino verengeka mu 3 mitauro, asi ndechokuti zvakafanana sokunge “vaipinda” mu thoe mitauro kana kuita zvandinoda kuita chinhu (kufanana cache peji imwe neimwe kana kuumba multisite?)
Thanks kusunungurwa itsva, uye API parumananzombe.
Mbudzi 30, 2011 pa 7:08 pm
Une dambudziko yako nzvimbo chisingafaniri kubvumira kutsvaka injini kuona nzvimbo yako, kufembera wangu nyaya Database, asi inoda yokuedzwa, kutirovera runhare zvakananga kuti kushanda kugadzira ichi
Zvita 2, 2011 pa 9:56 ndiri
OK Ofer, Ini ndasangana iwe zvakananga. Naizvozvo, Ndakundawo akabvisa akamudzivisa: /index.php / * kubva yangu robots.txt faira. Zvichida ichi chaiva chikonzero?
Zvita 2, 2011 pa 10:06 ndiri
Aihwa, chikonzero chinoshayikwa Database pamatafura, Handina kukunyorerai zvakananga pamusoro nyaya pamwe sei kurigadzirisa.
Zvita 1, 2011 pa 12:38 ndiri
update Great. Pane imwe nzira yokuita petsanga chero vakakura? Vanotarisa zvishoma vakarasikirwa pamusoro chena kumashure.
Zvita 1, 2011 pa 12:28 pm
Uchava kuwana makuru mireza uye kutsiva iyezvino ndivo, kana kunyora subwidget – ona http://trac.transposh.org/wiki/WidgetWritingGuide
Zvita 1, 2011 pa 6:01 ndiri
The plugin itsva akaputsa nzvimbo yangu pashure achiiisa nhasi. Ndinoshuva kuti dai ndisina asina upgraded nekuti yose nzvimbo yangu pasi zvino kana ini dzinoita plugin 🙁
Zvita 1, 2011 pa 12:25 pm
Ndapota edza apiwa kugadzwa zviri plugin kubva wordpress.org, mumwe parumananzombe kuti breakage kuti vanoshandisa Widget basa rakanga muAtlantic, unogona nesu zvakananga uye ticharamba kubatsira
Zvita 2, 2011 pa 10:53 ndiri
Pum Edit rwezuva Ver. 0.8, chii chanetsa?
Panzvimbo iyi http://www.wcafeasia.com ndakagadza ari plugin asi havagoni aongorore chero chinyorwa zvachose?
Iva mumwe nzvimbo ane erlier shanduro anoshanda zvakanaka, Ndine usel chete zviruva pamwe iyeyu (0.8), asi pum pepeta.
Handina dzinoisa à API anokosha Google (nokuti Browser)
Ani naani anoziva?
Zvita 2, 2011 pa 11:29 ndiri
dingindira wenyu rokukwidza munhu jQuery1.3.2 (riri rekare), kuchigadzira uye zvichava saizvozvo kufara chaizvo
Zvita 2, 2011 pa 1:18 pm
Thanks nokuti mhinduro! Une pfungwa sei kuita kuti?
Zvita 2, 2011 pa 3:21 pm
Edit ano dingindira mafaira kubvisa vanosanganisira (zvichida Header)
Kudzima faira pachahwo kana kuritsiva
Zvita 3, 2011 pa 6:39 pm
Re-yakaiswa .80 shanduro pa mirayiridzo, uye nzvimbo ichiripo 100% kuputswa kana ini dzinoita plugin.
Shoko renyevero – regai kuisa shanduro iyi, zvinogona kutyora wako nzvimbo saicho akaita zvangu.
Ini dzadzimwa ari Plugin forodha, Unzipped matsva kopi 0.80 uye vachiri yose nzvimbo anoenda dumbu kumusoro. hapana Matafura – ichava chena Browser chidzitiro.
Zvita 4, 2011 pa 8:19 ndiri
Ndinobvumirana, kumbobvira dzishandise chero upgrades, zvose ndiputse, asi wako nguva, kutarisa FAQ, pamwe ichi ndiyo nyaya kuyeuka muganhu, asi kwete kuti tinoona chikonzero nei richifanira kwakabatana kuti ndiwedzere.
ikozvino, kana uchida kuti nyaya iyi ragadziriswa, edza kukurukura nesu zvakananga, watinotaura edza kubatsira. Dzimwe nguva tinoita kwete
Zvita 4, 2011 pa 6:25 ndiri
The plugin ari kuridza akakwana kupfuura kare!
Zvinhu zvishoma kujekesa:
1. Ungakwanisa ndapota tsanangura sei kuwedzera rakashandurwa mapeji kuti Sitemap? (Handina kuwana kana iwe wakati nezvazvo yapfuura anoti).
2. Ko ichi Hoo pamwe WP Super cache?
Zvita 7, 2011 pa 1:11 ndiri
1. Mhinduro iri FAQ uye zvedu Dev yepaIndaneti (http://trac.transposh.org)
2. Ehe, zvikuru saka
Zvita 4, 2011 pa 10:28 ndiri
Chekutanga, regai kutaura, uine plugin kukuru. Ndiri muna USA, kushanda ari Directory nzvimbo MuMorocco. The default mutauro uri panzvimbo iri French. On nzvimbo iyi, mabhizimisi anogona kuwedzera kutarisa kuna dhairetori (mureza romukova mhando) kushandisa mutauro. Somuenzaniso kana bhizimisi vaifanira kuwedzera dzokushandura mu Chirungu, ari plugin achaita kushandura pambiru (Pachikamu) kunyika yose mumitauro zvinoshingaira, kunze mutauro default (nokuti anotenda zviri French?). Nemamwe mashoko, asi Chirungu shanduro uye kushandura French zvose chaizvoizvo chete Chirungu shanduro. Nzvimbo Varidzi vanoda vose nembiru kuratidza mumutauro default; uye anowanika neimwe mitauro vanoshingaira. Pane imwe shortcode kuti putira yose vanonyorwa mu, saka zvichaita kuratidza mumutauro default? (eg [TP kushandura ="ja"]Mhoro[/TP] uye kuratidza Bonjour. kana, pane zvimwe nzira kuita izvi?
Zvita 6, 2011 pa 3:02 ndiri
Ko munhu ane dambudziko iroro?
Hazvina kushandura zvakare
Zvita 7, 2011 pa 1:10 ndiri
Kana uchine matambudziko, usazeza kushandisa kuonana fomu iri panzvimbo iyi, uye tichazviita zvatinogona kubatsira
Zvita 6, 2011 pa 5:23 ndiri
tsime, I didnt kunzwa chinhu shure. zvisinei, Handina kufunga kuti kuita Ndaida kuita. Simply putira zviri mune div chipepa pamwe boka mylang.
wo, FWIW, nokuti munhu achitarisa kuburikidza nemashoko upi ruzivo pamusoro kana plugin ichi kushandura tsika romukova mhando. Kunyange zvazvo plugin asingadi kuziva musoro Tsika romukova mhando, unogona kutendeutsa plugin kushanda pamwe netsika romukova mhando, nokururamisira nokukurumidza. Unofanira aongorore mafaira maviri. Unofanira aongorore on_ajax_tp_translate_all() basa iri transposh_admin.php uye on_admin_menu() shanda, mu transposh_postpublish.php.
Zvita 6, 2011 pa 4:12 pm
I wokutanga akashandisa izvi，Kunzwa chinhu chikuru chivhariso-dzi。
asi，Ndiri Parizvino nematambudziko，
After kugadzwa，mapeji All akazviratidza：
mhosho 330 (mambure::ERR_CONTENT_DECODING_FAILED)
Sei I kugadzirisa?
Zvita 7, 2011 pa 1:08 ndiri
kufembera My vachava nezvinetso ndangariro, kana kaviri gzipping nyaya
Stacy & James anoti
Zvita 6, 2011 pa 5:55 pm
mamiriyoni ngaavongwe Ofer yokuitawo basa renyu.
Kunze yakarurama mushanduro hazvina kugamuchira multi-mitauro nzvimbo kana kupfuura 1 mutauro default rinoshandiswa mune nzvimbo.
Tinotenda nokuda private rubatsiro troubleshooting duku takava.
Zvita 7, 2011 pa 9:49 ndiri
makadii，Ndichiri kutsvaka mhinduro dzezvinetso。
I kubvunza akwanise，Kuchava：
“Isu havana kuwana kunotsigirwa-ndangariro caching injini, nekuisa mumwe anogona kuvandudza mashandiro. Check Transposh FAQs”
Ndakanga kuenda hanya nayo，Vachiri kugadzirisa pamberi vangabudirira kushanda?
Other，I Pari kushandisa wakaiswa URL marongero ari nhamba inonyatsoita，muenzaniso：http:://www.wukungfu.com/archives/123
Izvi URL yakatarwa zvichashaya?
Tarira mberi nokukurumidza kushandisa ~ Ndinokutendai rubatsiro rwenyu
Zvita 7, 2011 pa 12:02 pm
1. Unogona zvakachengeteka kusateerera yambiro iyi, chete ari waivako, ari plugin Achashanda pasina ichi
2. The permalink mamiriro ngauitwe.
Zvita 7, 2011 pa 1:09 pm
Ndakabva akavhara Gzip chakagadziriswa ^^。
Pari zvinobudirira kuzarura chivhariso-mu，
Asi handigoni kuona sidebar semi Ezvemutauro rokushandura，
Ndinoita sei chivhariso kupinda sidebar?
Mazvita，Ndinonzwa dzinenge ikoko! ^^
Zvita 7, 2011 pa 1:28 pm
Kuisa plugin ari sidebar, enda chitarisiko chako Muterere uye anodhonzera transposh Widget kuti sidebar, kusarudza Widget manyorerwo zvaunoda uye musoro uye ndizvozvo
Zvita 7, 2011 pa 1:26 pm
Ndakaona backstage kuisa kuzadza：
MSN API kiyi
Google API kiyi
Ndinogona kushandisa pamusoro MSN API iyo divi kuenda GOOGLE API?
Ndinokutendai kwenyu mberi rubatsiro ^^
Zvita 7, 2011 pa 1:30 pm
Unogona kuwedzera navo kana uchida, kutevera mirayiridzo nzvimbo yavo yakakodzera, asi nokuti ikozvino ichi harudikanwi
Zvita 7, 2011 pa 2:02 pm
Mazvita，Anogona pakupedzisira kuratidza。
zvisinei，Sei ndichifanira kusarudza mumwe mutauro (somuenzaniso,：Chirungu)，Page harina rakashandurwa asi?
Ndinokutendai nokuti simba rubatsiro ^^
Zvita 7, 2011 pa 2:24 pm
Nokuti musoro wako rokukwidza mumwe jQuery akwegura kwazvo (1.3.2), saka aongorore uye kuona kuti zvinoshanda
Zvita 7, 2011 pa 2:27 pm
Ini chete chivhariso mumbure sidebar，
Ndinogona kuona pachavo makombiyuta avo，
Asi mamwe kombiyuta uchishandisa Shique haana kuona。
Ndine urombo，Zvinetso zvakawanda -
Zvita 7, 2011 pa 3:38 pm
Happy ….kundoitora kushanda …
Wonderful chivhariso-mu ….
basa Great Ofer…
Zvita 8, 2011 pa 2:11 pm
kunyara，Unogona ndapota ndibatsireiwo kuwana peji yangu idambudziko?
For jQuery，Ndave kugadziridzwa zvishoma。
Vakwanise chivhariso-dzi ikozvino，asi Page、Article haisati yave shanduro yakakwana，
Zvita 11, 2011 pa 1:24 ndiri
The dzezvimwe vasati uye pashure bolded chinyorwa inonyangarika ari shanduro.
Unogona kuzviona pano?
Zvita 11, 2011 pa 1:28 ndiri
tsime, Ndinofunga ari kushandisa simba Tag pachinzvimbo wokushinga
Zvita 12, 2011 pa 1:33 ndiri
chaizvoizvo Ndinofunga tinofanira kushanda yakanaka, pasina chikonzero Hazvifaniri, Ndapota kupa URL apo hazvisi
Zvita 12, 2011 pa 8:22 pm
Unogona kuona http://intl.relatividad.org/pt/relatividade/albert-einstein-biografia-e-obras/
uye mapeji zvose rakashandurwa kuti chokutanga “simba” mutongo huri kukanganisa, asi muna
Zvita 13, 2011 pa 10:26 ndiri
Ndinoda kuramba kushandisa plugin dzenyu huru, asi ichi anotumira Server pamusoro zadzisa.
Ini ndakagadza memcached uye W3 Total cache (chete Database cache kwakaita), asi zvinobva tsamwisa.
Kana kushingaira Transposh pamusoro Blog have 7.000 mbiru, ichi chete zvokuti anorovera ari CPU.
Zvita 29, 2011 pa 11:59 ndiri
chii vari venyu Server Specs bhajeti Server yangu Pazvibato 3 huru Websites vane 20k mbiru + mumwe nomumwe transposh yakaiswa. Zvichida kuedza neizvi Marshal akafanana Nginx?